फिर्ता नीति | याजोल घडीहरू
हामी रिटर्न स्वीकार गर्छौं। तपाईंले आफ्नो डेलिभरीको 14 दिन भित्र रसीद वा खरिदको प्रमाण सहित मूल प्याकेजिङमा नखोलिएका वस्तुहरू फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको घडी (es) को डेलिभरी पछि 15 दिन वा बढी बितिसकेको छ भने, हामी तपाइँलाई फिर्ता वा विनिमय प्रस्ताव गर्न सक्दैनौं।
फिर्ता गरिएको वस्तुको प्राप्तिमा, हामी यसलाई पूर्ण रूपमा जाँच गर्नेछौं र ईमेलको माध्यमबाट सूचित गर्नेछौं, उचित अवधिमा, यदि तपाईं फिर्ताको हकदार हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईं फिर्ताको लागि हकदार हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको खरीद मूल्य फिर्ता गर्नेछौं र क्रेडिट स्वचालित रूपमा तपाईंको मूल भुक्तानी विधिमा लागू हुनेछ।
केवल नियमित मूल्य वस्तुहरू मात्र फिर्ता हुन सक्छ। बिक्री आइटम गैर-फिर्ती योग्य हो।
तपाईंको फिर्ताको स्थितिमा फलो-अप गर्न, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्दै.
हामी केवल सामानहरू साट्छौं यदि तिनीहरू दोषपूर्ण वा क्षतिग्रस्त छन्। परिस्थितिहरूमा जहाँ तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि उत्पादन दोषपूर्ण छ, तपाइँले तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ यहाँ क्लिक गर्दै उत्पादन र दोष को विवरण संग।
हामीले सम्पर्क गरेपछि हामी तपाईंलाई ठेगाना पठाउनेछौं!
फिर्ता गरिएको उत्पादनको प्राप्तिमा, हामी यसलाई पूर्ण रूपमा जाँच गर्नेछौं र ईमेलको माध्यमबाट सूचित गर्नेछौं, उचित अवधिमा, यदि तपाईं त्रुटिको नतीजाको रूपमा प्रतिस्थापनको हकदार हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई एक प्रतिस्थापन उत्पादन पठाउनेछौं।
तपाईंको घडी(हरू) फिर्ता गर्नको लागि हामी सम्पर्कमा आएपछि तपाईंलाई ठेगाना पठाउनेछौं
फिर्ती फिर्ता प्याकेजिंग स्लिप वा इनभ्वाइसमा देखाइएको कुनै शिपिंग र ह्यान्डलिंग शुल्क समावेश गर्दैन। सबै फिर्ताको लागि शिपिंग शुल्क तपाईं द्वारा प्रीपेड र बीमा हुनै पर्छ। तपाईं ढुवानीको समयमा हार्डवेयरमा हुने कुनै पनि नोक्सान वा क्षतिको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी ग्यारेन्टी छैनौं कि हामी तपाईंको फिर्ता आइटम प्राप्त करेंगे। शिपिंग र ह्यान्डलिंग शुल्कहरू फिर्ता योग्य छैनन्। कुनै पनि रकम फिर्ता रकममा शिपिंगको लागत समावेश हुँदैन।
तपाईंको शैलीको प्रशंसा गर्ने घडीहरू!
© २०२० याजोल घडीहरू - साइटमैप
गोपनीयता नीति - नियम - फिर्ता नीति - वारंटी